Abalawuli berhorho Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ivuliwe Realtyww Info
Ulawulo lwezinambuzane ubuncinci njengobudala kwezolimo, njengoko bekusoloko kukho isidingo sokugcina izilwanyana zingenazinambuzane. Ukuze wandise ukuveliswa kokutya, kuluncedo ukukhusela izityalo kwiintlobo zezityalo ezikhuphisanayo, nakwimifuno ekhuphisana nabantu. Indlela eqhelekileyo yayiyeyokuqala ukuqeshwa, kuba kulula ukuthelekisa ukhula ngokulutshisa okanye ngokulima phantsi, nokubulala ii-herbivores ezinkulu ezinokhuphiswano, ezinje ngamahlosi nezinye iintaka ezitya imbewu. Iindlela zobuchule ezinje ngokujikeleziswa kwezityalo, ukutyala kwamaqabane (okwaziwa ngokuba kukunqunquna okanye ukulima isityalo esixubileyo), kunye nokukhethwa kokuzala kwemveliso yokulwa nezinambuzane inembali ende. E-UK, kulandela inkxalabo malunga nentlalontle yezilwanyana, ukulawulwa kwezibulala-zinambuzane kunye nokuthintela ukufumana umhlaba kusetyenziswa isayikholoji yezilwanyana kunokuba itshabalalise. Umzekelo, nge-red fox ebomvu ese dolophini esetyenziswa ekulweni sisilwanyana, idla ngokudibana nezinto ezingafunisiyo ukwenzakala ngemichiza. Kwiindawo ezisemaphandleni zaseBritani, ukusetyenziswa kwemipu kulawulo lwezinambuzane kuxhaphakile. Ii-airguns zithandwa kakhulu kulawulo lwezinambuzane ezincinci njengeempuku, imivundla kunye neegrey squirrels, ngenxa yamandla asezantsi anokusetyenziswa kwiindawo ezinomda ngakumbi njengeegadi, apho ukusebenzisa umpu bekungangakhuselekanga.